निःशुल्क जापानिज भाषा अध्ययनको प्रमुख गन्तव्य निहोन - Narayanionline.com
शम्भु पन्त ‘चार्ली’ चितवनको शैक्षिक क्षेत्रमा एक परिचित नाम नै हो । गोरखाको साविक ताङ्लीचोक गाविस–१ सिम्लेमा जन्मिएका चार्लीले काठमाडौँबाट आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि चितवनलाई नै कर्मथलो बनाए । नारायणगढ लायन्स चोकको निहोन एजुकेशनल सेन्टर प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक उनी एक अनुभवी जापानिज भाषा शिक्षक पनि हुन् । उनी विद्यार्थीलाई विदेशमा उच्च शिक्षाको परामर्श मात्र दिँदैनन् । फुर्सद मिल्नासाथ फूटबल खेल्ने, हेर्ने साथै गीतहरुको रचना गर्ने पनि उनका सौखहरु छन् ।
चार्लीका गीतमा चर्चित गायक प्रमोद खरेलदेखि नेपाल आइडल रवि ओडसम्मले गाएका छन् । ‘तिम्रो लागि अग्निमा’, ‘मायाप्रिति’ उनका पुराना चर्चित गीत हुन् भने अब उनको नयाँ एल्बम चार्लीज् आइडल सङ निकट भविष्यमा बजारमा आउने तयारीमा छ । उनै बहुप्रतिभाको धनी चार्लीसँग नारायणी अनलाइनले गरेको व्यवसायिक वार्ताको केही अंश :
प्रश्न : विद्यार्थीहरुले तपाईँको निहोन एजुकेसनल सेन्टर किन रोज्ने ?
जवाफ : निहोन मलाई निकै मन परेको नाम हो । जसले जापानलाई बुझाउँछ । काठमाडौँको वानेश्वरमा निहोन एजुकेसन सेन्टर भन्ने सुनेको थिए । पछि मलाई पनि साथीहरुले कन्सल्टेन्सीको नाम निहोन राख्न अनुरोध गरे । जसकै कारण मैले नारायणगढमा विसं २०७२ सालमा निहोन एजुकेसन सेन्टर खोलेँ । नाम मात्र होइन यसले दिने सेवाहरु विश्वसनीय र भरपर्दो भएकोले पनि यसमा विद्यार्थीहरु आकर्षित हुने गरेका छन् ।
प्रश्नः कस्ता कस्ता सेवाहरु उपलब्ध छन् ?
जवाफ : निहोन एजुकेसन सेन्टरमा जापानको जस्तै संस्कार र वातावरण पाउन सकिन्छ । मैले सेन्टरमा भाषा कक्षा निःशुल्क गरेको छु । त्यसैगरी जापान भिसा आवेदनमा पनि हामीले ५० प्रतिशत छुट गराएका छौं । एजुकेसन सेन्टरभित्र विद्यार्थीलाई पुस्तकको लागि पैसा तिर्न नपर्ने व्यवस्था गराएका छौं । विद्यार्थीहरुलाई भविष्यमा रोज्ने व्यवसायको बारेमा परामर्श पनि गरिने भएकोले सबैको रोजाइमा निहोन नै परेको छ ।
प्रश्न : आजसम्म कति विद्यार्थी तपाइँको एजुकेसन सेन्टरबाट विदेश गए ?
जवाफ : हामीहरुले कोरिया र युरोपका विभिन्न देशहरुमा पनि विद्यार्थी पठाउने भए पनि जापानमा हामी बढी केन्द्रित भएका छौं । जापानमा हामीले ५२ जना विद्यार्थी पठाइसकेका छौं भने अहिले ४० जनाभन्दा बढीले भिसा आवेदन गरिरहेका छन् । जापान पुगेका विद्यार्थीले पनि हामीसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहन्छन् । हामीले पठाएका विद्यार्थीहरुबाट अहिलेसम्म हाम्रो सेवाप्रति कुनै नराम्रो प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
त्यसैगरी हामीले यही वर्षबाट कोरिया पनि विद्यार्थीहरु पठाउन सुरु गरेका छौं । कोरियामा १० वर्ष बसेर आएका योग्य प्रशिक्षकले कोरिएन भाषा पढाइरहेका छन् । निहोनबाट युरोपियन देशहरु माल्टा, साइप्रस, लक्जेम्बर्ग, डेनमार्क, पोर्चुगल र साइप्रस पनि विद्यार्थी पठाउन थालिएको छ । साइप्रस चाहीँ आईएलटीएस नभए पनि विद्यार्थीहरु जान सक्छन् ।
प्रश्न : जपानिज भाषाको लागि जापानिज भाषा प्रशिक्षक ल्याउने व्यवस्था छ ?
जवाफ : एक वर्षमा दुई देखि चार जना गेष्ट लेक्चर ल्याउने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
प्रश्न : जापानमा काम र शिक्षाको अवसर कस्तो छ ?
जवाफ : जापानमा दुःख गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले जाने विद्यार्थीलाई धेरै राम्रो छ । काम र अध्ययनको अवसर धेरै राम्रो छ ।
प्रश्न : अन्त्यमा, तपाईँ गीतकार पनि हुनुहुन्छ ? गीत लेख्ने प्रेरणा को बाट पाउनुभयो ?
जवाफ : भित्री मनबाटै आएको हो ।
लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएकोमा नेपालको आपत्ति [तस्विरसहित]
चेन्नइको फराकिलो जित, पन्जाब समूह चरणबाटै बाहिर
वाग्मती प्रदेश प्रमुख प्रसाईँसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश
नेपालमा साइबर अपराध बढ्यो, पछिल्लो १० महिनामा मात्र ११६ मुद्दा
बिचौलिया विरुद्ध चितवनका किसान विरोधमा,सडकमै फाले अण्डा